Podcasters sy bilaogera - Easy Multi Display - signage nomerika
Omeo ny tsara indrindra ho an'ny mpijery anao!
"Amin'ny Easy Multi Display, afaka manome ny tsara indrindra ho an'ny mpijery aho!"
Ny mpamono afo teo aloha, mpanorina orinasa marobe nefa koa mpandraharaha sady podcaster, Paul Abercrombie dia manana tadiny maro ary izy no tandindon'ny "lehilahy namboarin-tena". Androany dia mizara ny zavatra niainany tamin'ny mpihaino azy tamin'ny alàlan'ny podcast nahomby maro izy!
Mba hanomezana fahafaham-po ny vondrom-piarahamoniny, dia nanapa-kevitra ny hividy ny vahaolana Easy Multi Display ho an'ny efijery 6 mba hampisehoana haino aman-jery sy antontan-taratasy mandritra ny podcasts-ny izy.
Easy Multi Display dia manome azy fidirana amin'ny safidy maro toy ny fiasan'ny drafitra, hafatra an-tsoratra na ny fiasan'ny mpampiasa!
Tranonkala Paul Abercrombie
Andriamatoa Abercrombie dia mampiasa Easy Multi Display amin'ny podcasts-ny mba handefasana hafatra ho an'ny fiarahamonina misy azy.
Te hanana rindrambaiko feno izy hanolorany ny tsara indrindra ho an'ny fiaraha-monina misy azy! Ka nisafidy ny Easy Multi Display sy ireo endri-javatra maro izy ka nahatonga azy io ho iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena.
Hatsarao ny zavatra niainan'ny mpijery anao
Ampitao mora kokoa amin'ny mpijery anao ny fampahalalana amin'ny alàlan'ny fandefasana horonantsary, sary na antontan-taratasy mandritra ny podcast-nao!